Muxuu Shariif ula kulmi waayey oo uu uga shakiyey qorshaha ergeyga QATAR - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Ergeyga Gaarka ah ee dowladda Qatar Mutlaq bin Majed al-Qahtani ayaa xalay kula kulmay Caasimadda Muqdisho xubnaha golaha musharaxiinta kadib markii uu shalay la kulmay madaxda dowlada federaalka.
Si kastaba ha ahaatee, wararka ugu muhiimsan ee safarka wafdiga ayaa ahaa kulamadii dhacay laakiin aan dhicin, kaasoo ahaa wafdiga Qatar iyo madaxweynaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed. Muxuu Shariif oo ah hogaamiyaha ugu weyn ee Midowga Musharaxiinta u diiday inuu la kulmo wafdiga Qatar?
Marka la fiiriyo taariikhda Qadar ee Soomaaliya, gaar ahaan afartii sano ee la soo dhaafay, Qadar ma aysan sameynin hal shay oo uu ixtiraamo Shariif lana kulmi karo wakiilkiisa. Waxaa sidoo kale isweydiin mudan, oo shaki weyn dhalineysa sababta ergeyga loogu diray Qatar waqtigan.
Safarka ergayga ayaa ku soo beegmaya xilli Midowga Afrika uu isku dayayo inuu ergay gaar ah u diro Soomaaliya, isla markaana ay midowgu qaateen siyaasad ka careysiisay xulufada Qatar ee Villa Somalia, kadib markii ay si adag u cambaareysay muddo kordhinta sharci darrada ah ee madaxweyne Farmaajo.
Xubnaha mucaaradka ayaa sheegaya in ergayga isla markiiba loo diray laba arrimood; 1- In la wiiqo qorshaha dhexdhexaadinta ee Midowga Afrika iyo 2- In la dejiyo mucaaradka jabiyay taageeradii shacabka iyo militariga ee dowladda federaalka todobaadkii hore.
Dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ka jirtay afartii sano ee la soo dhaafay waxay ahayd Qatar oo saaxiib muhiim ah la ahayd Farmaajo. Waxay ku taageertay Farmaajo lacag sharci darro ah oo ka baxsan nidaamka maaliyadeed ee dalka, kaas oo loo adeegsaday caburin, weerar iyo daciifinta siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta diidan. Waxaa loo adeegsaday in lagu iibsado xubnaha baarlamaanka, qof kasta oo khudbadiisa loo arko inuu saameyn ku leeyahay wuxuu helayaa laaluush bille ah.
Maxaa xal ah marka Qatar ay isku daydo inay dhex gasho Soomaalida, ama ay waji ka dhigato mucaaradka, si haddii uusan Farmaajo u soo laaban, aysan meesha ugu dhicin.
Xubno ku dhow Shariif oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in madaxweynihii hore ay qabeen su’aalo ay ka mid yihiin: Aaway Qatar afartii sano ee la soo dhaafay, markii ay ku baaqeysay kaalmada shisheeye iyo inay wax ka qabato xadgudubka Villa Soomaaliya?
Qadar xitaa ma aysan xusin markii Muqdisho ay ololeysay usbuucii la soo dhaafay markii ay ciidamada dowladdu weerareen guryaha Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay dagaallo ka bilowdeen axadle. Ma uusan soo hadal qaadin markii Farmaajo iyo Mursal ay sameysteen mudo kordhin laba sano oo sharci daro ah, markii Beesha Caalamka oo dhami soo saartay qoraal ay ku diidayso.
Waxaa muuqata inaanu shaki kujirin in Qadar ay muddo afar sano ah saarnayd dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya isla markaana ay sii hurisay qalalaasaha dalka ka jira.
Qadar waligeed ma taageerin Soomaaliya iyo dadkeeda laakiin waxay taageertay shaqsi u adeegaya danaheeda. Hadaad rabto inaad ogaato sida ay u egtahay taageerada Soomaaliya iyo dadkeedu, fiiri turkiga. Maxay Qadar ku sameysay Soomaaliya?
Waxa kaliya ee hadda la filan karo ayaa ah in Qatar ay qiratay qaladkeeda ayna dhab ka tahay xal u helida, laakiin taariikhdeeda taariikheed ma muujineyso rajadaas.